रङको लक्ष्य- कला - कान्तिपुर समाचार
पुराना चित्रहरू सडकका धूलोले केही धुमिल हुँदै छन् भने नयाँ चित्रहरू थप्ने उनको प्रयास जारी छ । लामो लकडाउन र हाल जारी निषेधाज्ञामा पनि उनको कुची रोकिएको छैन ।
भाद्र २१, २०७७ सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — जीवन र जगतका हर वस्तुमा रङ निहित छ । रङले सजिएका प्रकृतिका हरेक वस्तुमा खास अर्थ हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् चित्रकारहरू । तिनै रंगीन चीजबिजमा जीवन्त आवाज खोज्दै छन्– चित्रकार लक्ष्मण श्रेष्ठ । कोरोनाले थलिएको काठमाडौंको मुहार र सुनसान बनेको सडकका भित्ताहरूमा अचेल रङले उत्साह थप्दै छन् ।
मध्यबानेश्वरको बाटो भीमसेनगोलातर्फ थोरै अगाडि बढ्दा बायाँतर्फका भित्री सडकका भित्ताहरूमा श्रेष्ठले कोरेका चित्रहरू देखिन्छन् । पुराना चित्रहरू सडकका धूलोले केही धुमिल हुँदै छन् भने नयाँ चित्रहरू थप्ने उनको प्रयास जारी छ । लामो लकडाउन र हाल जारी निषेधाज्ञामा पनि उनको कुची रोकिएको छैन । खासमा चित्रकार श्रेष्ठलाई आगामी दुई वर्षभित्रमा भीमसेनगोलामा नै ‘इम्टी पकेट प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत ‘खोज अभियान’ का लागि एक सय एक वटा भित्तेचित्रहरू बनाउनु छ । त्यसैका निम्ति उनी हरेक दिन उक्त स्थानका भित्ताहरूमा उनका कला सिर्जनाहरूले सजाइरहेका छन् । श्रेष्ठका अनुसार करिब दुई वर्षअघि सुरु भएको उनको प्रोजेक्टमा हालसम्ममा ३०/४० वटाको हाराहारीमा भित्तेचित्रहरू बनिसकेका छन् । लकडाउनयता मात्र उनले दुई दर्जनभन्दा बढी चित्रहरू कोरिसकेका छन् ।
समकालीन समाजको ऐनाका रूपमा चित्रकारहरूले दशकौंदेखि रङकै माध्यममा प्रकृति, पर्यावरण, मानव जनजीवन, संस्कृति, धर्म, सामाजिक, परम्परा, मानवीय संवेदनाका यावत् पक्षहरू खोतल्दै सशक्त सन्देश दिँदै आइरहेका छन् । चित्रकार र तिनका कला आम मानिस र राज्यको नजरमा अझै पर्न नसकेको विडम्बना छ । चित्र र चित्रकारहरूको संघर्षलाई समाजमा ल्याउन नै सडकमा आएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हामीले चित्रमा देखाउने समाज र मानवीय प्रवृत्तिलाई पहिले आम मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘बन्द कोठाका ग्यालरी र प्रदर्शनी स्थलमा सीमित कलालाई खुला समाजमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।’ युवा पुस्ताले आफ्नो कला चिनाउने परम्परागत सोचलाई ब्रेक लगाउँदै नयाँ धारमा जानुपर्ने उनको मत छ । त्यसैले त उनी चित्रसँगै समाजका वृद्धदेखि बालक, साधुसन्तसम्मका जीवनलाई नियाल्दै त्यसलाई चित्रमा ढाल्दै छन् ।
त्यसो त भित्तेचित्र नौलो विधा भने होइन । मानव विकासको आदिम कालमा भाषा, लिपि र अन्य माध्यमहरूको विकासपूर्व विभिन्न गुफाका भित्ताहरूमा चित्रमार्फत नै मानिसले विचार आदानप्रदान गरेको इतिहासले बताउँछ । पछिल्लो समयमा भने नयाँ पुस्ताले पश्चिमा ग्राफिटी चित्रलाई पछ्याउँदै सूचनामूलक सन्देशसहित सडक र घरका भित्ताहरू रंगाउँदै आइरहेका छन् । चित्रकारहरूले यस्ताखाले चित्रहरू आफूखुसी सार्वजनिक खुला स्थान वा निजी घरका भित्ताहरूमा बनाइने गरिन्छ । चित्रकार श्रेष्ठ आफू बस्ने भीमसेनगोलाका स्थानीयलाई चित्रको महत्त्व बुझाएर नै भित्ता रंगाउँदै आएको सुनाउँछन् । उनले त्यही भित्तामा कोरेका चित्रहरूमा आफ्नो जीवनको खुसी र लक्ष्य देखेका छन् । ठूला–ठूला क्यानभासमा चित्र कोरेर उनलाई न कुनै प्रदर्शनी गर्नु छ, न त कुनै प्रतिस्पर्धा नै । चित्र बेचेर जीवन चलाउँला भन्ने पनि उनको सपना छैन । ‘रङको जोहो गरेर समाज, समय र सत्य कुरालाई चित्रमा देखाउने नै मेरो उद्देश्य हो । म सडकका प्रत्येक स्तरका मानिसलाई चित्रकला देखाउन चाहन्छु । मेरो सिर्जनाको कुनै आर्थिक मूल्य र ठूलो योजना छैन,’ उनी भन्छन् । सडकलाई साझा थलो मान्ने उनी जनतादेखि नेतासम्मको पहुँच रहने त्यसैमा रङ भर्न रुचाउँछन् । त्यसैले त उनले आफ्नै पुरानो थलो नेपालगन्जबाट नै सडकमै चित्र सुरु गरे । ‘सांसद भर्सेस जनता’, ‘भद्रगोल देशका व्यस्त नागरिक’, ‘म मस्त देश अस्तव्यस्त’ जस्ता उनका सिर्जनामा उनले राजनीतिक अवस्थाको चित्रणसँगै सचेतनाको काम गरे ।
राजधानीकै सडकका भित्ताहरूमा उनका ‘नालायक म’, ‘डेड सरकार’, ‘घण्टा सरकार’ सिरिजका चित्रहरूले तरंग नै पैदा गरेको थियो । महानगरपालिकाले ती चित्रहरूलाई मेटाइ नै दिएका थिए । कला विस्तारकै नाममा काठमाडौं बसाइमा उनले घाम, पानी, रात, दिनका हरेक अभावहरू भोगेका छन् । धनाढ्यदेखि सडकमा बस्ने आम मानिसको यथार्थलाई चित्रमा व्यक्त गरेको उनी बताउँछन् । ‘मेरो सिर्जना सरकारका लागि विरोध होइन,’ उनी खुलाउँछन्, ‘समाजमा जे छ, त्यही नै मैले प्रतिकात्मक रूपमा देखाएको मात्र हो ।’ उनका अनुसार सरकार भन्नेबित्तिकै शासन सत्ताको संकेत मात्र होइन । हामी स्वयं प्रत्येक मानिस आफ्नो शरीर र विचारका लागि सरकार हो । उनी भन्छन्, ‘समाज र जीवनलाई कता डोर्‍याउने भन्ने जिम्मा हामी आफैंमा छ । हाम्रो मन र इच्छाको शासक हामी हौं । आजको समय र सपना हाम्रै हातमा छ ।’
उनी सबैलाई आजको विषम समयलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गर्न सुझाउँछन् । उनको त्यही भाव र सोच नै चित्रहरूमा देख्न सकिन्छ । भीमसेनगोलाकै भित्ताहरूमा उनले कोरेका गतिशील, घोडा, चरा, कमिला, सेता बाघका चित्रहरूमा पवित्र भावसँगै निरन्तर दौडेका उनका साहसहरू झल्कन्छन् । भित्तामै देखिने सिधा औंला, औंलाहरूबीचमा देखिने सुन्दर आँखाका चित्रहरूले समाजको नकारात्मक दृष्टि, दबाब र कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो लक्ष्यको गन्तव्यतिर लाग्नुपर्ने सन्देश दिन्छन् ।
अहिले कला क्षेत्रमा दिग्गजहरूले नयाँ पुस्तामा गर्नुपर्ने समन्वय र सहकार्य नै उनी देख्दैनन् । नयाँ पुस्ताले दिग्गजहरूलाई सम्मान गर्दै कलालाई नयाँ आयाम दिन अग्रसर हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘चित्रकारहरूबीच नै एकले अरूको कामलाई प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘म आफैंले नै आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्छु । कलालाई यदि साँच्चै नै नयाँ धारमा लैजाने हो भने नयाँ पुस्ताले जोखिम मोलेर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
तीबाहेक उनले ‘जलाएकी म’ जस्ता चित्रमार्फत महिला हिंसाका पक्षलाई पनि उजागर गरेका छन् । ढुंगेधारा (हिटी), थोपा–थोपा चुहिएको धारामा सकसपूर्ण तरिकाले पानी पिइरहेको चराको चित्रमा उनले उपत्यकाका विलिन हुँदै गएका परम्परागत पानीका मुहान र बढ्दो खानेपानीको समस्यालाई औंल्याएका छन् । यसलाई सांकेतिक संकेत र खबरदारीका रूपमा लिन्छन् श्रेष्ठ । सुरुवाती चरणमा समूहमा काम गरे पनि हाल उनी एक्लै चित्र कोर्दै छन् । शिवकुमार शर्माले भने उनका प्रत्येक योजनालाई अक्षरमा ढाल्दै छन् । अभावका बाबजुद पनि पूर्ण सन्तुष्टिमा अघि बढेका उनका कला सिर्जना, कलालाई हेर्ने अहिलेको समाज र हालको कला जगत्जस्ता विविध पक्षलाई पुस्तकका रूपमा भावी पुस्तासमक्ष पुर्‍याउने उनको योजना छ ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७७ १३:१८
डा. केसीको कर्णाली अनुभव : ‘कोरोनाको डरले गाउँलेहरु रोग पालेर बसेका छन्’
भाद्र २१, २०७७ कलेन्द्र सेजुवाल
सुर्खेत — गाउँमा डाक्टर आएको थाहा पाएपछि हुम्ला, ताजाकोटकी ९ वर्षीया बालिका असार पहिलो साता उनलाई भेट्न मैला स्वास्थ्यचौकी पुगिन् । तीन साताअघि बालिकाको पाखुरा भाँचिएको थियो ।
कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा सबै बिरामी ती बालिकाजस्तै भाग्यमानी भने छैनन् । चैत ११ देखि सुरु भएको देशव्यापी लकडाउनले थुप्रैको भाग्य ‘लक’ गरिदिएको छ । लकडाउन सुरु भएदेखि नै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा स्वयंसेवा गरिरहेका डा. केसीले ग्रामीण क्षेत्रका मान्छे रोग पालेर बस्न बाध्य भएको बताए । ‘लकडाउनले गाडी नचल्दा बिरामी अस्पताल जान सकिरहेका छैनन्, कतिपय त कोरोनाको डरले पनि अस्पताल जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘मान्छेहरूमा त्रास छ, कोरोनाका कारण उपचार नपाएर अन्य रोगले मान्छेहरू मरिरहेका छन् ।’ नसर्ने र दीर्घरोगका बिरामी लकडाउनको मारमा बढी परेको उनले बताए ।
फागुन पहिलो साता डडेलधुरा अस्पताल पुगेका केसी त्यहाँ दुई महिना बसे । डडेलधुराका साथै बैतडी, डोटी, बझाङका बिरामीको उपचार गरे । त्यहाँ उनले उपचारका लागि धनगढी, नेपालगन्ज वा भारत जानुपर्ने जटिल समस्या भएका बिरामीको पनि शल्यक्रिया गरे । ‘मैले भेट्न नसकेका यस्ता बिरामी गाउँमा अरू पनि होलान्,’ उनले भने ।
असार पहिलो साता कर्णालीको हुम्ला पुगेका केसीले यहाँको अवस्था अझ नाजुक देखे । कोरोना–यात्राका क्रममा उनले गाउँका स्वास्थ्य–संस्थामा पर्याप्त औषधि र स्वास्थ्यकर्मीमा सीपको अभाव रहेको पाए । लकडाउनका कारण गाउँमा औषधि आपूर्ति नहुने र बिरामीहरू अस्पताल जान नसक्ने हुँदा समस्या झन् विकराल बनेको उनको भनाइ छ ।
ताजाकोटको मैला स्वास्थ्यचौकीमा केसी आएको थाहा पाएपछि हात भाँचिएकी एक महिला उपचार गराउन पुगिन् । तर त्यो स्वास्थ्यचौकीमा काम्रोसमेत थिएन । उनले दुई वर्षअघि शिविर चलाउँदा छोडेर गएको काम्रो मगाई त्यसैले उपचार गरिदिए ।
डा. केसी कोरोनाको प्रभावलाई ‘साइन्टिफिक एनालाइसिस’ गरेर त्यससम्बन्धी रणनीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उपचार नभएको रोग भए पनि अहिले नेपालमा यसको मृत्युदर १ प्रतिशत पनि छैन । ‘बरु हेर्दा सामान्य देखिने झाडापखालाजस्ता रोगका कारण बर्सेनि १० हजार मान्छे मरिरहेका छन्, अन्य दीर्घरोगले पनि उत्तिकै मात्रामा ज्यान लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण रोक्ने भन्दै हचुवाका भरमा लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्दा अन्य रोगका कारण मृत्यु हुनेको दर बढ्न सक्छ ।’
उपल्लो कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा र मुगुका कतिपय गाउँबाट जिल्ला अस्पताल पुग्न ३–४ दिनसम्म लाग्छ । गाउँकै हेपोमा पुग्न ५–६ घण्टा लाग्छ । डा. केसीले यस्तो विकटतामा बसेका मान्छेका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको अधिकार कोरोनासिर्जित लकडाउनले खोसेको बताए । स्थानीय सरकार पनि जनताले भोगिरहेको सास्तीबारे बेखबरजस्तै रहेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय ठाउँमा त बिरामी अस्पताल जान नपाएर छट्पटाइरहेका छन्, स्थानीय तहका सरकारी गाडीहरू कम्पाउन्डभित्र पार्किङ गरेर राखिएका छन्,’ उनले भने ।
भदौ १२ गते बिहान डा. केसी जुम्लाको गुठीचौरस्थित स्वास्थ्यचौकीमा गएका थिए । त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय अगुवा उनलाई भेट्न आए । उनीहरू कसैको मुखमा पनि मास्क थिएन । ‘गाउँका सबैभन्दा सचेत मान्छे नै यति लापरबाही गरिरहेका छन् भने लकडाउन गर्दैमा कोरोनालाई जितिन्छ त ?,’ उनले भने ।
केसी राज्यले लकडाउनभन्दा बढी जोड सचेतीकरणमा दिनुपर्ने सुझाउँछन् । मास्क अनिवार्य लगाउने, साबुनपानीले हात धुने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो भने लकडाउनको आवश्यकता नपर्ने उनको भनाइ छ । यो काममा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई स्वयंसेवी रूपमा परिचालन गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘यति बेला गाउँका जनतालाई सही सूचना र ज्ञानको खाँचो छ, लकडाउनले भने कोरोनालाई ठूलो हाउगुजी बनाएको छ,’ उनले भने, ‘लकडाउन गर्दैमा कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भन्ने सरकारी सोचले समस्याको खाडल झन् गहिरो बनाइरहेको छ ।’
डा. केसी २२ वर्षअघि पहिलोपटक जुम्ला पुगेका थिए । अहिलेजस्तो सडक थिएन । हिँडेरै खलंगा पुगेका थिए । पछिल्लोपटक कोरोना कहरले उति बेलाको भन्दा सास्ती दिएको उनको अनुभव छ । कतिपय ठाउँमा त पानीसमेत पिउन नपाएको अनुभव उनले सुनाए । ‘कोरोनाबारे गाउँमा भ्रमपूर्ण सन्देश फैलाइँदा एक–दुई ठाउँमा मैले बास पनि पाउन सकिनँ, यसो हुनुमा गाउँलेभन्दा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने राज्यका निकायको दोष हो,’ उनले भने, ‘गाउँलेहरू एक–आपसमा अत्यन्तै असावधानीसाथ बसेका छन्, नयाँ मान्छेलाई भने अछुतको व्यवहार गर्छन् ।’
डडेलधुराबाट सुरु भएको ६ महिना लामो यात्रामा उनी एक्लै छन् । लकडाउनले गाडी नचल्दा हिँडेरै गाउँ–बस्तीमा सेवा गरिरहेका छन् । साउन तेस्रो साता बिहान ८ बजे जुम्लाको खलंगाबाट हिँडेर भोलिपल्ट बिहान ११ बजे मुगुको गमगढी पुगेको स्मरण गर्दै ७४ वर्षीय केसीले भने, ‘म एक हिसाबले बूढो पनि हुँ, सामान्यतया दुई दिन लाग्ने बाटोमा छिटै हिँडेजस्तो लाग्छ ।’ हाडजोर्नीसम्बन्धी बिरामीको उपचारका साथै कोरोनाबारे सचेतनासमेत फैलाउने गरेको उनले बताए ।
केसी स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले ठाउँ–ठाउँमा अवरोध गर्दा भने आक्रोशित छन् । डोल्पाको जगदुल्ला र जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले अनुमतिबिना बिरामी जाँचेको भन्दै उनलाई रोक लगाएका थिए । जुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्नसमेत रोक लगाएको थियो ।
शुक्रबार बिहान कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा औषधी किन्न जाँदा पनि अवरोध गरिएपछि उनको आक्रोश झन् बढेको छ । ‘म आफ्नो मर्जीले जनतालाई सेवा गर्न आएको हुँ, यसको लागि कसैको अनुमति लिँदैन, भनसुन पनि गर्दैन,’ उनले भने, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्टर्ड चिकित्सक हुँ, सरकारी सेवाबाट रिटायर्ड भएपछि आफ्नो ज्ञान र अनुभव बाँड्नेबाहेक मेरो अरू कुनै स्वार्थ पनि छैन ।’ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सरकारका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा ‘तानाशाही’ योजना लाद्ने साधन भएको केसीले आरोप लगाए ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७७ १३:०८